Home » Creative Writing » အွန်လိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောမှုခင်းများ
^^^ အွန်လိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော မှုခင်းများ ^^^
မှုခင်းဟုဆိုရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေအရပြဌန်းထားသောကျူးလွန်မှု ဖေါက်ဖျက်မှုများကိုဆိုလိုပါသည် ။
( အဆိုပါဥပဒေများ ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက်ို ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ )
ယနေ့ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်တွင် တယ်လီဖုန်းများ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပြည်ဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း
သို့ရာတွင် မိဘများ၏သဘောထားလည်းအရေးကြီးလေသည် ။တချို့သောမိဘများသည် မိမိသားသမီးကိုယုံစားလွန်းသည်နှင့်အားလျော်စွာ အခြားသူများသတင်းပေးပါက ဘူးခံ၍ ငြင်းတတ်သည် ။ထိုထက်ပိုပြီးလျှင် ရန်လုပ်ခြင်း ၊ အထင်လွဲခြင်းများဖြင့် တုန့်ပြန်တတ်သောကြောင့် အဆိုပါမိဘများအား ပြောဆိုသတင်းပေးရန် လွန်စွာခက်ခဲလှပေသည် ။
ဤတွင် အမုန်းမခံလိုသောသူများသည် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့်သာ လစ်လျူရှုတတ်ကြပါသည် ။
တလောက… ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးတွေရဲ့.. ကိုယ်တုံးလုံးပုံတွေ အင်တာနက်ထဲပြန့်သွားဖူးတယ်..။
မင်းသမီးတွေဘာများလုပ်ရသလဲဆိုတော့.. အဲဒါတွေမကြည့်ပါနဲ့.. ပါစင်နယ်တွေပါလို့.. ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းပန်ရတော့တာ…။
.တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ ကိုရာမညရေ။
”မိကျောင်းမင်း ရေကင်းပြ ”မဟုတ်ဘူးလား ကရာမည
မိကျောင်းမင်းကို ”ရေကင်း” ပြ တယ် ဆိုလားးး
One of the Good Posts in this month.
One of the best လုပ်​ပါ မမယီး
One of the worst comments in this month.
ဆိုင်​ဘာ ဘူလီယင်းအ​ကြောင်း​တော့ ​နောင်​အချိန်​ရရင်​
ဒါတွေလုပ်ရင် ဒီလို ပြစ်ဒါဏ် တွေ က စောင့်နေတယ် လို့ အသေအချာ ထုတ်ပြန်တာတွေ၊
ခေတ်ကာလရေစီးကိုမပိတ်ပင်ပေမယ့်… အရွယ်ရောက်လို့ အွန်လိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်…
အူးကျောက်စ် ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး မမနှင်းမွေးပေးတာ ယောကျာင်္းလေးမို့ တမျိုးတော်သေးလို့များ တွေးနေလားဟင်…
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်ဗျာ။ မှန်ပါ့ ကိုရာမညရေ။ အခုလေးတင်ပဲ Celebrity လိုနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် နှစ်ကြိမ်တိတိ Cyber Bullying လုပ်ခံနေရပြီးပြီ။ ဒါလည်း အမှတ်မရှိ ပုံတွေ ထပ်တင်တုန်း။ ဘဝပျက်မှပဲ မှတ်လောက်သားလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီပြဿနာတွေက အင်တာနက် စပေါ်လာတာနဲ့ ကြုံရတာတွေပါပဲ။ ခုနောက်ပိုင်းဆို ပိုပြီး ဆိုးလာတာ တွေ့ရတယ်။ သုံးတတ်ရင် ပညာရ မသုံးတတ်တော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိကုန်ကြတော့တာပါပဲ။ လူတွေကလည်း သိသိနဲ့ကို အသုံးပြုလာကြတော့တာပဲ။ မလွယ်တော့ မလွယ်ဘူး။
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်မေးလ်လေးတောင် ဟက်ခံရပြီး ၀င်လို့မရတော့ဘူး။
လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးလ်များဆို ဒုက္ခ။
-အကောင့်ဖွင့်ပီးတာနဲ့ password ကို strong ဖစ်တာရွေးထား
အမှန်က ဖဘအကောင့်မှာ ကိုယ်မသိသူမထားတာ ကောင်းဒယ်ဗျ..
ဟုတ်​ပါ့ အဲ့က​လေး​တွေ ဘယ်​နှယ့်​ဖြစ်​ပြီး like အဲ့​လောက်​ကြိုက်​တယ်​မသိ